Imandarmedia.com.np: सुरु भयो सत्ता परिवर्तनको खेल, यस्तो छ ओली अचानक चीन जानुको गम्भीर कारण !
Big News, Political » सुरु भयो सत्ता परिवर्तनको खेल, यस्तो छ ओली अचानक चीन जानुको गम्भीर कारण !
सुरु भयो सत्ता परिवर्तनको खेल, यस्तो छ ओली अचानक चीन जानुको गम्भीर कारण !
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली साताब्यापी भ्रमणका सिलसिलामा शनिबार उत्तर छिमेकी चीन प्रस्थान गरेका छन् ।
ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको निम्तोमा बेइजिङ प्रस्थान गरेको एमालेले जनाएको छ । काठमाण्डुमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर आउने चर्चा सुरु भएकै बेला भएको ओलीको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार ओलीले राष्ट्रपति सीसहित उच्च चिनियाँ नेतृत्वसँगको भेटमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्नेछन् ।
ओली गत वर्ष प्रधानमन्त्री छँदा चीन भ्रमणमा गएका थिए । ओलीलाई बिदाई गर्न एमाले नेताहरु बामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल , सुवास नेम्वाङ लगायत विमानस्थल पुगेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत साता मात्र बंकक भ्रमणमा गएका थिए । पत्नी सीताको स्वास्थ्योपचारमा गएको बताइए पनि उनले त्यहाँ चिनियाँ र भारतीय अधिकारीसँग भेटघाट गरेका थिए ।
बैंककबाट फर्केलगत्तै बसेको जिल्ला इन्चार्जसहितको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट पार्टी बाहिरिन सक्ने बताएका थिए । लगत्तै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले र माओवादी मिल्नु मुलुकको हितमा भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा खरो टिकाटिप्पणी गर्दै आएका दुई नेताबीच एकाएक ‘ट्युनिङ’ मिल्नुलाई राजनीतिक कोर्ष परिवर्तनको संकेतमा रुपमा हेरिएको छ । काठमाडौं टुडेमा खबर छ
२०७४ साउन ८ मा प्रकाशित ।